Họtelu ndi di na Lagos, - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Ihe nkowa Banyere Lagos Nigeria
Ọ bụrụ na ị ka biabeghi Lagos nke mbu, ọ pụrụ ịbụrụ gị ihe siri ike ịghọta obi ụtọna ihu n'anya igwe mmadụ ndị bi na ya na enwe. N'ụzọ dabara adaba a na akpọ ya mba New York nke Afrika, Lagos bụ ebe ọṅụ na ihe ịma aka na ihu nke obodo na-emepe emepe ngwa ngwa di. Otu n'ime obodo ndị kachasi ukwu na mba Afrika, otutu ihe na adọrọ mmasị na họtelu di na ya bụ nke di ịtụnanya. Họtelu ndi di na Lagos bu nke na ahu maka ihe uto maka mmefu ego nile nke bu na I gaghi achọ ebe I ga anọ. Nanị chọ na ihe azumahia anyi nke igwe komputa mba uwa maka itinye akwụkwọ maka họtelu ndi di na Lagos. Otutu họtelu dị iche iche bu nke i pụrụ ịchọta nke oma na isi ochichi ime obodo nile di na Lagos.
Agbataobi Lagos ndi di iche iche
Ọ bụrụ na ị na a bia neleta na Lagos nke mbụ, nwe ezi mkpebi maka akụkụ obodo ya I ga ano dika akụkụ ya ndi di iche iche na na-enye ihe ndi dịkwa iche iche. Obodo nwere ulo ọchịchị isi ime obodo iri abụọ ndi mmadụ bijupụtara na ya, i kwesịrị ịma ebe ị na-aga ka i wee ghara –ifu uzo . Ebe obibi ndu di elu gụnyere Lekki, Ikoyi na gburugburu Victoria Island nke ndi ji ego bi na ya. Ebe ndị a bu kwa ebe ndi enwere ụlọ azumahia ahịa di ukwu, ulo ihe nkiri egwuregwu (sirima) ma n'ezie, nwe kwa akwa ngafe na elu mmiri amama bu nke togarisiri ogologo na mba Afrika. Ebe ndị ọzọ na-ewu ewu amama gụnyere Ikeja , Surulere, Yaba na Oshodi na gburugburu ya
Ebe Njem nleta ndi di na Lagos
Obodo Lagos bu nke ogige njem nleta na adọrọ mmasị nke ukwu jupụtara na ya. Ma ị bu onye nkwado nkà, omenala na akụkọ ihe mere mgbe ochie ma ọ bụ na ị na- enwe mmasị na ihe ndi na adọrọ mmasị nke oge a, Lagos ga enye gi ha nile. Ụfọdụ ogige egwuruegwu di nma nke ukwu maka njem nleta na Lagos gụnyere National Museum, National Arts Theatre (Ulo Ebe ihe egwuruegwu nka na uzu), Lekki Conservation Centre, Lacampagne Tropicana Beach Resort , Freedom Park, Fela’s Shrine , Silverbird Galleria , The Palms, The Slave Port, The Floating School, na Makako.
Ime Njem Ngaghari Na Lagos
Ụzọ di ngwa iji kpaghari na gburugburu Lagos bụ na ijị ụgbọala nke onwe gị, ma leepụ anya maka ihe nke amighiama nke ejee akwuru fachifachi nke ụgbọala njem na okporo uzo! Ọ bụrụ na i nwere ike ikpota onye ọkwọ ụgbọala I puru I no na ugboala gi na na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na igwe kọmputa gị mgbe fachifachi ejee akwuru nke ụgbọala jidere gi na okporo ụzọ. Uzọ ọzọ nke ime njem na Lagos bụ site na iji ugboala taxi ma ọ bụ usoro nke ụgbọala ọha na eze: BRT na ụgbọala molue ma ọ bụ ụgbọala ogba tumtum amaara dị ka keke napep.
Atụmatụ maka Ime njem
Oge kasị mma ime njem nleta na Lagos bụ n'oge Ekeresimesi oke okochi mgbe mmiri kwụsịrịla, anyanwụ na acha. A na enwekwa otutu ndị mmadụ na obodo na oge a dị ka umuafo Nigeria ndi bi na mba ndi ozo dị iche iche na alota maka ileta ndi ezinụlọ ha n’oge Ekeresimesi. Gbali a hu na I ga a choputa ebe mme-mme di na Lagos, dị ka okwu nke Banky W, "bụ enweghi ihe mme-mme mba ọzọ dị ka nke Lagos!" Ekewara Lagos uzo abuọ nke bu Otamiri (Ala ọkọrọ) na Ala akuku mmiri (Mainland and Island). Ana ahuta họtelu ndi di oke onu n'akụkụ abụọ nke Lagos dị ka ọtụtụ họtelu na Victoria Island na Lekki ma họtelu ndi amama na Island bụ Intercontinental Họtelu Lagos, Eko Họtelu Lagos, Oriental Họtelu Lagos na Protea Họtelu Victoria Island. Họtelu ndi di onu na ebe Otamiri Alakoro (Mainland) bụ Sheraton Họtelu Lagos, Protea Họtelu Ikeja, Ọ bụrụ na ị na-achọ izụ ahịa na Lagos, Ọ ga adi nma na I ga a gaa na otu n'ime ọtụtụ ulo ebe azumahia dị ka Palms na Lekki ma ọ bụ Shoprite na Ikeja. Ndị ulo ebe azumahia ndi a na enwe ulo ahia ndi di iche iche ebe ị nwere ike ịzụta ezigbo ihe ndi dị iche iche. Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ ime, akụkụ kasị mma na Lagos bụ ebe a na akpo energy. Ya mere, bilie, mee njikere ma bia a na ebe ahu. Eko o ni baje o!